Amazon Prime မှအကောင်းဆုံးဟိန္ဒူရုပ်ရှင် ၃၀ သည် - ဖျော်ဖြေရေး
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Celeb ကြည့်ပါ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဘယ်လို အရေပြား စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် ကြံ့ခိုင်ရေး ကြည့်ရမယ် ပြည်တွင်း စိတ်ဖိစီးမှု၏
အမေဇုံမှအကောင်းဆုံးဟိန္ဒူရုပ်ရှင် ၃၀ သည်ယခုအချိန်တွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန်ဖြစ်သည်
တစ်လက်မအမြင့်ရှိတဲ့စာတန်းထိုးကျော်လွှားမှုကိုကျော်လွှားပြီးတဲ့နောက်ပိုပြီးအံ့ films ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သူများသည်ပညာရှိစကားများဖြစ်သည် ကပ်ပါး သူအဖြစ်ဒါရိုက်တာ Bong Joon Ho သူ၏ရွှေကမ္ဘာလုံးကိုလက်ခံခဲ့သည် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား - နှင့်သူသည်တကယ်ကောင်းသောအချက်ကိုပြသည်။ ကျနော်တို့ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာရုံတင်မကဘူး ကိုရီးယားဘာသာစကားရုပ်ရှင် , ဒါပေမယ့်လည်း, ငါတို့ (ရုံအနည်းငယ်အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြရန်) က၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုဂီတအချစ်ဇာတ်လမ်း, နက်နဲသောအရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုနှင့်ဖှယျပြဇာတ်နှင့်အတူ, ငါတို့ခြေချောင်းအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ရုံ၏ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာကြီးသို့နှစ်မြှုပ်ခဲ့ကြရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်တွေ့ရှိထားသောကျော်ကြားသောဘောလီးဝုဒ်ဘွဲ့များစွာရှိသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် (ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုကြည့်နေမည်), ရှိုး အမေဇုန်တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဟိန္ဒူရုပ်ရှင် ၃၀ ကိုသင်ယခုယူဆောင်လာရန်ရုပ်ရှင်စွဲလန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သော:7အက်ပလီကေးရှင်းများအနေဖြင့်သင် ASAP Stream လုပ်သင့်သည့်ရုပ်ရှင်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးတည်းဖြတ်သူတစ် ဦး ၏အဆိုအရ
၁။ The Lunchbox '(၂၀၁၄)
Saajan (Irrfan Khan) နှင့် Ila (Nimrat Kaur) တို့တွင်ရှိသောဤချစ်စရာကောင်းသောခံစားမှုကောင်းသောဒရာမာစင်တာများသည်နေ့လည်စာစာပေးပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုရောနှောခြင်းပြီးနောက်မဖြစ်နိုင်သည့်နှောင်ကြိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်လူနှစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံးလျှို့ဝှက်မှတ်စုများကိုဖလှယ်ကြသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုန်းကန်မှုများနှင့်မတူကွဲပြားသည့်ဇာတ်ကောင်များကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်လာသည်။
၂ 'ပျက်ကွက်မှု' (၂၀၂၀)
ဒီ COVID-19 ကူးစက်မှုမှထွက်လာသောကောင်းသောအရာတစုံတခုရှိလျှင်၊ ၎င်းသည်မှုတ်သွင်းလိုက်သောတောက်ပသောရုပ်ရှင်ကားအားလုံးဖြစ်သည်။ ထိုခေါင်းစဉ်များထဲတွင်ဟိန္ဒူမနုologyဗေဒပါရှိသည် လက်မခံနိုင် , ကအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြသူကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်များ၏ဘဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဤရုပ်ရှင်သည်အထီးကျန်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေး၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့်အသစ်စသောခေါင်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
3. 'Shikara' (၂၀၂၀)
Rahul Pandita ၏စာအုပ် 'တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မွန်းတွင်သွေးခဲများရှိသည် , Shikara ကတ်ရ်ှမန်းပန်ဒစ်များထွက်ခွာသွားစဉ်ကက်မီရီပန်ဒစ်စုံတွဲ၊ ရှန်တီ (ဆဒီယာခါတီနှင့်ရှီဒါး (အဒန်ခန်) တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုနောက်ဆက်တွဲ - ဟိန္ဒူဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 90s ။
4. 'Kai Po Che!' (၂၀၁၃)
တစ်ရှူးအချို့ကိုဆုပ်ကိုင်ရန်ပြင်ဆင်ပါ၊ ၂၀၀၂ ဂူဂျာရတ်အဓိကရုဏ်းအတွင်း Ahmedabad တွင်ဤရုပ်ရှင်သည်မိမိတို့၏အားကစားအကယ်ဒမီကိုဖန်တီးရန်အိပ်မက်မက်သောရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်သူငယ်ချင်းသုံး ဦး ဖြစ်သည့် Ishaan (Sushant Singh Rajput), Omi (Amit Sadh) နှင့် Govind (Rajkummar Rao) တို့၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ သို့သော်လည်းနိုင်ငံရေးနှင့်လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုများသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုစိန်ခေါ်သည်။
မည်သည့်အရာကပိုအရေးကြီးသနည်း။ ဤသည်မေးခွန်းသည်အလွန်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏အဓိကဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာပြင်ပသို့ခရီးသွားစဉ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအင်ဒီးယန်းလူငယ်နှစ် ဦး ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ Raj (Shah Rukh Khan) သည် Simran ၏မိသားစု (Kajol) ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားသော်လည်း Simran ၏ဖခင်ကသူမအနေဖြင့်သူငယ်ချင်း၏သားကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုသောဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တောင်းဆိုသည်။
၆ 'ပုဒ်မ ၃၇၅' (၂၀၁၉)
အိန္ဒိယပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၅ ကို အခြေခံ၍ ဤစဉ်းစားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်တရားခွင်၌ပြဇာတ်သည်နာမည်ကျော်ဘောလီးဝုဒ်မှဒါရိုက်တာ Rohan Khurana (Rahul Bhat) သည်သူ၏အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအားမုဒိမ်းမှုစွပ်စွဲချက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အမှု၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစွမ်းထက်သောဖျော်ဖြေမှုမှသည်ပြတ်သားသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအထိ၎င်းသည်သင့်အားထိုင်ခုံ၏အစွန်းတွင်ရှိနေစေမည်။
၇။ 'ဟစ်ကီ' (၂၀၁၉၉)
Brad Cohen ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ၊ အတန်းရှေ့။ Tourette Syndrome ငါ့ကိုဘယ်တုန်းကမှမသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆရာကိုဘယ်လိုလုပ်စေခဲ့တာလဲ , Rani Mukerji သည်သူမသည် Tourette syndrome ရောဂါခံစားနေရသောကြောင့်သင်ကြားရေးနေရာရရှိရန်ရုန်းကန်နေရသော Ms. Naina Mathur အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ မရေမတွက်နိုင်သောငြင်းပယ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်သူမသည်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသောစိန့် Notker ကျောင်းတွင်မိမိကိုယ်ကိုသက်သေပြရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။
၈။ Maqbool (၂၀၀၄)
ဒီဘောလီးဝုဒ်မှာ William Shakespeare ရဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု Macbeth မွန်ဘိုင်းတွင်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူ Jahangir Khan (Pankaj Kapur) ၏သစ္စာရှိနောက်လိုက် Miyan Maqbool (Irrfan Khan) ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသည်။ သို့သော်သူ၏စစ်မှန်သောအချစ်ကသူ့အား Khan အားသတ်ဖြတ်။ သူ၏နေရာတွင်အစားထိုးရန်သွေးဆောင်သောအခါသူသည်သူ၏သရဲတစ္ဆေကြောင့်ဖြစ်သည်။
၉။ Karwaan (၂၀၁၈)
Avinash သည်မအောင်မြင်သောသူ၏မကျေနပ်သောအလုပ်ကိုရပ်တန့်သွားသည်။ သူထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည့်အခါကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်သွားသည်။ ဤသတင်းကိုကြားပြီးနောက်သူနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းသည်ဘင်္ဂလားလူမှ Kochi သို့ရှည်လျားသောခရီးကိုလမ်းလျှောက်ရင်းလူငယ်တစ် ဦး ကိုလမ်းလျှောက်ချီတက်ကြသည်။ အစွမ်းထက်သောဇာတ်လမ်းနှင့်လှပသောရှုခင်းများအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပါ။
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မျက်နှာမျက်နှာဆံပင်ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
၁၀။ Thappad (၂၀၂၀)
Amrita Sandhu ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Vikram Sabharwal သည်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်သူမအားလူစုလူဝေးရှေ့မှောက်တွင်ရိုက်နှက်သောအခါသူသည်တာ ၀ န်ယူရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး her ည့်သည်များကသူမကို 'ဆက်လုပ်ရန်' အားပေးခဲ့သည်။ သို့သော် Amrita သည်တုန်လှုပ်နေပြီးယင်းသည်သူမအပြင်ထွက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်သင့်သည်ဟူသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ခါးသီးသောကွာရှင်းမှုနှင့်သူမ၏မမွေးသေးသောကလေးအတွက်ချုပ်နှောင်ထားတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။
၁၁။ နယူတန် (၂၀၁၇)
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်၎င်းတို့၏နောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လာသောအခါနယူတန်ကမ်မာ (Rajkummar Rao) သည်အစိုးရစာရေးတစ် ဦး အားဝေးလံခေါင်သီသောကျေးရွာတစ်ရွာတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ကွန်မြူနစ်သူပုန်တွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့်ဒီစိန်ခေါ်မှုကသက်သေပြနေပါတယ်။
၁၂။ Shakuntala Devi (၂၀၂၀)
STEM မှအမျိုးသမီးများသည်ဤပျော်စရာ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိဒရာမာကိုအထူးနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်“ လူ့ကွန်ပြူတာ” ဟုနာမည်ကြီးခဲ့သောကျော်ကြားသောသင်္ချာပညာရှင် Shakuntala Devi ၏ဘဝကိုပုံဖော်ထားသည်။ ၎င်းသည်သူမ၏အထင်ကြီးလောက်သောအလုပ်အကိုင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသော်လည်းထိုရုပ်ရှင်သည်သူမဘဝကိုလွတ်လပ်စွာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာမိခင်တစ် ဦး အနေဖြင့်အနီးကပ်ကြည့်နိုင်သည်
၁၃။ ဂါဇီတိုက်ခိုက်မှု (၂၀၁၇)
၁၉၇၁ ခုနှစ်အိန္ဒိယ - ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲအပေါ် အခြေခံ၍ ဤစစ်ပွဲရုပ်ရှင်သည် PNS Ghazi ရေငုပ်သင်္ဘော၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနစ်မြုပ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာထားသည်။ ဒီစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများတွင်ပါကစ္စတန်သင်္ဘောသည် INS Vikrant ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားသော်လည်းမမျှော်လင့်သော visit ည့်သည်လာသောအခါသူတို့၏ရည်မှန်းချက်မှာရပ်ဆိုင်းသွားသည်။
၁၄။ 'Bajirao Mastani' (၂၀၁၅)
Ranveer Singh၊ Deepika Padukone နှင့် Priyanka Chopra ကြယ်ပွင့်များသည်အမျိုးသားရုပ်ရှင်ဆု ၇ ဆုအပါအ ၀ င်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Maratha Peshwa Bajirao I (Singh) နှင့်သူ၏ဒုတိယဇနီး Mastani (Padukone) အကြားရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမဇနီးကိုပုံဖော်သော Chopra သည်ဤရုပ်ရှင်၌ခိုင်မာသောဖျော်ဖြေမှုကိုပေးသည်။
Harinder Sikka ၏ ၂၀၀၈ ဝတ္ထုကိုအခြေခံသည် Sehmat ကိုခေါ်ဆိုခြင်း, ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်သူလျှိုသည်းထိတ်ရင်ဖိုသည်ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အရာရှိတစ် ဦး ၏ဇနီးအဖြစ်အိန္ဒိယသို့သတင်းပို့ရန်လျှို့ဝှက်စွာသွားနေသောအသက် ၂၀ အရွယ်သုတေသနနှင့်လေ့လာရေး Wing အေးဂျင့်၏မှတ်တမ်းကိုလိုက်နာသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုချစ်မြတ်နိုးစဉ်သူမသည်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါသလား။
၁၆။ 'Mitron' (၂၀၁၈)
Jai (Jackky Bhagnani) သည်သူ၏သာမန်လူများနှင့်လွယ်လွယ်ကူကူနေထိုင်ပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာနေထိုင်သည်။ သို့သော်သူ့အဖေမှာမူမဟုတ်ပါ။ မိမိသား၏ဘဝတည်ငြိမ်ရေးရောက်စေဖို့အပူတပြင်းကြိုးပမ်းမှုမှာသူ Jai ဇနီးရရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော် Jai သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော MBA ဘွဲ့ရ Avni (Kritika Kamra) နှင့်အတူလမ်းကြောင်းများဖြတ်ကျော်သွားသောအခါအခြေအနေများမမျှော်လင့်ဘဲပြောင်းလဲသွားသည်။
၁၇ 'Tumbbad' (၂၀၁၈)
၎င်းသည်သံသယများနှင့်ပြည့်နှက်နေရုံသာမကဤရုပ်ရှင်တွင်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လောဘကြီးမှုတို့နှင့်ပတ်သက်သောအင်အားကြီးမားသောသတင်းစကားပါ ၀ င်သည်။ Tumbbad ရွာတွင် Vinayak (Sohum Shah) သည်တန်ဖိုးရှိသောဝှက်ထားသောဘဏ္treာကိုရှာဖွေနေသည်။ သို့သော်ဤကံကြမ္မာကိုစောင့်ရှောက်သောဆိုးသွမ်းသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်။
Sonu Sharma (Kartik Aaryan) သည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်မှုမရှိဟုထင်ရသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးသွားသောအခါသူ၏အဆိုးမြင်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်ရည်းစားအကြားရွေးချယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ အားလုံးရယ်စရာ One-liners မျှော်လင့်ထား။
အဘယ်သူသည်ဖှယျလာမယ့် - အသက်အရွယ်ပုံပြင်ကိုမချစ်သနည်း သူသည်မွန်ဘိုင်းရှိဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များ၌လမ်းပေါ်မှရက်ပ်အနေဖြင့်ကြိုးပမ်းနေစဉ် Murad Ahmed (Ranveer Singh) ကိုလိုက်နာပါ။ ပျော်စရာအချက် - ၂၀၂၀ မှာစံချိန်တင် 13 Filmfare Awards ကိုရရှိခြင်းဖြင့်သမိုင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
၂၀။ Agent Sai (၂၀၂၀)
Agent Sai သည်ရထားလမ်းအနီးတွင်မသိရသောအလောင်း၏အသွင်သဏ္investigာန်ကိုစတင်စူးစမ်းလေ့လာသည့်အချိန်တွင်အတော်လေးစွန့်စားခန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်များမှအစ၊ အေးဂျင့်စိုင်း စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Batla House မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအမှုအခင်း (Batla အိမ်တွင်ပုန်းအောင်းနေသောအကြမ်းဖက်သမားများအားဖမ်းဆီးခြင်းပါဝင်သောဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ဆင်ရေး) အပေါ် အခြေခံ၍ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးနှင့်ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲရာဇ ၀ င်များတွင်ဖမ်းဆီးရန်အရာရှိ Sanjay Kumar (John Abraham) အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ပြေးသူများ။
22. '' စစ် '(2019)
Khalid (Tiger Shroff) သည်အတိတ်မှောင်မိုက်အတိတ်ရှိအိန္ဒိယစစ်သားတစ် ဦး အားလူဆိုးလူဆိုးဘဝမှဖယ်ရှားပစ်ရန်တာ ၀ န်ယူသောအခါသူ၏သစ္စာရှိမှုကိုသက်သေပြရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ပြင်းထန်စွာချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့်ရုပ်ရှင်သည် 2019 ခုနှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအများဆုံးဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာပြီးယနေ့တိုင်အိန္ဒိယအချမ်းသာဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
၂၃။ 'ရွှေ' (2018)
အိန္ဒိယ၏ပထမ ဦး ဆုံးအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်၏ဤအမြင်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖှယျစစ်မှန်တဲ့ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအချို့သောသမိုင်းအပေါ်တက် Brush ။ Reema Kagti သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးအမျိုးသားဟော်ကီအသင်းနှင့် ၁၉၄၈ နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသို့သွားသောခရီးစဉ်တွင်အဓိကပါဝင်သည်။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ထဲတွင် Mouni Roy, Amit Sadh, Vineet Kumar Singh နှင့် Kunal Kapoor သရုပ်ဆောင်တို့ဖြစ်သည်။
Captain Gopinath ၏စာအုပ်အပေါ်အခြေခံထားသောဤ Amazon Prime မူရင်းတွင် Suriya၊ Paresh Rawal နှင့် Mohan Babu ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပျံသန်းပါ။ Deccan Odyssey ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု၏အကူအညီဖြင့်ပျံသန်းခြင်းကိုပိုမိုတတ်နိုင်စေသည့်လေကြောင်းလိုင်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာရန်မည်သို့မည်ပုံစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Balraj Kapoor (Amitabh Bachchan) သည်ကံဆိုးစွာဖြင့်မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင်သူ၏သားကိုဆုံးရှုံးသောအခါသူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသူမအားလျှို့ဝှက်စွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့သောကလေးဘဝမိခင်ဖြစ်သူ Millie (Rani Mukerji)၊ မုဆိုးမဖြစ်သူယောက္ခမဖြစ်သူအားတိုက်တွန်းသည်။ မျှတသောသတိပေးချက်၊ tearjerker အချိန်အနည်းငယ်ရှိသည်၊ တစ်ရှူးများကိုလွယ်ကူစွာထားပါ။
၂၆။ 'Jab We Met' (၂၀၀၇)
သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူနှင့်ပြတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဖြစ်သောအောင်မြင်သောစီးပွားရေးသမား Aditya (Shahid Kapoor) သည် ဦး တည်ရာကိုစိတ်မပါဘဲရထားဖြင့်သွားလာရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော်သူ၏ခရီးစဉ်တွင်သူသည် Geet (Kareena Kapoor) အမည်ရှိအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကံဆိုးစွာသောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသောင်တင်နေပြီး Aditya သည်ဤချစ်စရာကောင်းသောမိန်းကလေးအတွက်ကျဆုံးနေသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာ? သူမမှာရည်းစားရှိပြီးသား။
၂၇ ။ 'Phir Milenge' (၂၀၀၄)
Tamanna Sahni (Shilpa Shetty) သည်ကျောင်းပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကာလတွင်သူမ၏ကောလိပ်ရည်းစား Rohit (Salman Khan) နှင့်အချစ်ဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့၏အတိုချုပ်ကိစ္စအပြီးတွင်သူမအစ်မကိုသွေးလှူရန်ကြိုးစားသောအခါသူသည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးစစ်ဆေးခြင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသောအခါသူအလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အယူအဆမှသည်အလုပ်ခွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအထိအရေးကြီးသောပြissuesနာများစွာကိုဖြေရှင်းရန်ထူးခြားသည့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။
၂၈ 'Hum Aapke Hain Koun' (၁၉၉၄)
အကယ်၍ သင်သည်အရောင်အသွေးစုံသည့်ကိန်းဂဏန်းများ၊ ဟိန္ဒူမင်္ဂလာဆောင်ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်တွန်းလှန်ထိုက်တန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများ၌ကြီးကြီးမားမားရှိပါကသင်၏စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါ။ ဒီစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဟာငယ်ရွယ်သောဇနီးမောင်နှံနောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်မိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဂန္ထဝင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သည်အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူဒါရိုက်တာ Kamal Amrohi ၏ဇနီး Meena Kumari အားချစ်သောမေတ္တာဖြစ်သည်။ Sahibjaan (Kumari) သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေရန်နှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသံသရာမှလွတ်မြောက်ရန်တောင့်တသည်။ သူမတောအုပ်တောအုပ်ကိုသွားတွေ့သောအခါသူမဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူ့မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလွန်ထောက်ခံကြသည်မဟုတ်။
များစွာသောဒဏ္Indianာရီအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားများအဖြစ်မှတ်ယူလေ့ရှိသည့်ဤအနောက်ပိုင်းစွန့်စားမှုသည်အငြိမ်းစားရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီးသူခိုးနှစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်နေသူတစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြံစည်မှုမှလှည့်ကွက်မှသည်သွက်သွက်သောကခုန်သည့်အထိအထိ၎င်းသည်ဘာကြောင့်ဤအချိန်ကာလ၏အမြင့်ဆုံးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားများဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
Categories မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
လူကြီးများအတွက် bday ဂိမ်းများကို
ယောဂ Asana အမျိုးအစားမည်မျှရှိသည်